Qaramada Midoobay oo soo Fara-galisay Kufsi Gabar Somaliyeed loogu Gaystay Nauru – Radio Daljir
Oktoobar 29, 2015 5:13 b 0
Oktoobar 29, 2015 (Daljir) —Xafiiska xuquuqda aadanaha ee QM [OHCHR] ayaa sheegay inay ka walaacsan tahay kufsigii gabar Soomaaliyeed oo lagu magacaabo, Abyan loogu geystay jasiiradda Nauru bishii July ee sannadkan; gabadhaasoo dowladda Australia ay dib ugu celisay jasiiraddii lagu kufsaday ee Nauru.
Australia iyo Nauru ayuu xafiisku ugu baaqay maanta inay daryeel jir ahaaneed iyo mid maskaxeedba ay siiyaan Abyan, daryaalkaas caafimaad oo uu ku jiro in ilmaha laga soo tuuro haddii ay ogolaato.
Sidoo kale, xafiiska Qaramada Midoobay ee OHCHR ayaa sheegay in Abyan ay leedahay uur saddex bilood ah, ayna dowladda Australia si khasab ah ugu celisay 11-maalmood ka hor Jasiiradda Nauru oo ah halkii lagu kufsaday.
OHCHR, ayaa warbixintiisa ku xusay inay la xiriirtay Abyan ayna u sheegtay inay xanuun dhanka maskaxda ah qaadday, tan iyo markii kufsiga sharci-darada ah loo geystay.
“Abyan waxay diidday inay booliiska jasiiradda Nauru siiso warbixinta la xiriirta kooxihii weeraray ee kufsiga u geystay, maxaa yeelay waxay ka baqday in mar kale ay kooxahaas dhibaato u geystaan. Ma dareemayso inay amaan haysato, waayo kooxihii dhibka u geystay weli waxay ku nool yihiin Nauru oo ah jasiirad yar oo ay ku nool yihiin 10,000 oo qof,” ayuu afhayeenka UHCHR, Rupert Colville ugu sheegay wariyeyaasha magaalada Geneva.
Mr. Colville ayaa intaas ku daray in xafiiska xuquuqda aadanaha ee QM, UHCHR uu ka walaacsan yahay wararka ku saabsan in booliiska jasiiradda Nauru aysan wax tallaabo ah weli ka qaadin kooxaha xad-gudubyada kula kaca haweenka, gaar ahaan kuwa haweenka magan-galyo doonka ah dhibaateeya.
Ugu dambeyn, afhayeenku wuxuu xusay in xafiiskoodu uu ka war-hayo inay kor u kaceen xadgudubyada kufsiga ah ee ka dhacaya jasiiradda Nauru, laga soo billaabo markii ay dowladda Australia billowday inay magan-galyo-doonka ah ee gala dalkeeda dajiso Nauru sannadkii 2012-kii.